प्रचण्ड जी ‘प्रतिगमन पनि भन्ने, सरकार पनि नछाड्ने ? - हाम्रो देश
प्रचण्ड जी ‘प्रतिगमन पनि भन्ने, सरकार पनि नछाड्ने ?
काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको चरित्र द्वैध भएको बताउनुभएको छ ।
एक अनलाइनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, ‘न सरकारलाई प्रचण्डजीले प्रतिगमनकारी भनिराख्नुभएको छ, उहाँको पनि सरकार हो । कुनै पनि बहानामा त्यस्तो कुरा गर्न पाइन्छ रु समर्थन फिर्ता लियो भने के हुन्छ ? संवैधानिक रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’